Nhau - "LUXMAIN" inopedzisa iyo yakareba-dhizaini dhizaini nyowani yemagetsi emagetsi emagetsi bhatiri rinosimudza trolley
Sezvo yekutanga nyowani yemagetsi emagetsi emagetsi bhatiri kukatanura nekusimudza chikuva chakaiswa pamusika muna 2017, "LUXMAIN" yakatsaurirwa kumusika wezvakakosha maturusi emagetsi emagetsi matsva, uye yakabudirira kugadzira "yakakosha", "yepasirese" uye " otomatiki kufamba ". Matatu akateedzana anopfuura gumi mamodheru emagetsi bhatiri disassembly uye marori ekusimudza egungano ave akasarudzika kana kukurudzirwa mhando nemagetsi akawanda. Ivo vanoiswa kune auto ekugadzirisa zvitoro, nyowani magetsi auto mafekitori, uye auto makoji.
Pakati pavo, iyo michina inotora electro-hydraulic drive, iyo humburumbira yemafuta inomuka ichidonha yakatwasuka, simba rakasimba, kukweshera uye kuveura simba kweiyo humburumbira yemafuta idiki, uye hupenyu hwebasa hwakareba.
Iyo midziyo ine rakagomarara uye rinodzoreka rinosimudza bracket, iro rinogona kuona shanduko yemhando dzakasiyana uye kusimudza nzvimbo, uye inokodzera kusimudza mabhatiri ehukuru hwakasiyana uye maumbirwo, nekudaro ichityora kuburikidza yakamisikidzwa chimiro uye saizi yeinosimudza chikuva Tungamira kune kukamurwa kwemhando imwe chete yebhatiri.
Bhureki rinogona kutenderedzwa 360 °, uye kukwirira kwezororo remuchindwe kunochinja. Tenderedza bhureki kuti usangane nezvinodiwa zvemabhatiri munzira dzakasiyana dzekumisikidza. Kureba kwemazamu mana emichindwe kunogona kunyatsogadziriswa kuti uwane yakawanda-yekunongedzera kona kurereka. Panguva imwecheteyo, iyo bracket inogona kutenderedzwa zvishoma kuti ive nechokwadi chekuti bhatiri rinokwira gomba uye gomba rekugadzirisa muviri rakanyatsoenderana.
Inesarudzo DC12V uye AC220V simba, rakakura kushanda kuchinjika.
Yakashongedzerwa nechimbichimbi kumira switch uye waya wekubata mubato, mashandiro acho akachengeteka uye ari nyore.
Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Kaviri Post Inground Simudza, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Imwechete Kuita Cylinder, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza,